Iglasi yokubumba, iglasi enobushushu, iglasi egqunyiweyo- iglasi yokuthambisa
Yantai Joyshing Glass Co., LTD. ， Njengomvelisi okhethekileyo kunye okhokelayo kunye nomthengisi weemveliso ezahlukeneyo zeglasi eTshayina, ijolise ekunikezeleni isisombululo seglasi yokumisa phambili kulwakhiwo, umhombiso, ukuthuthwa, ukhuselo, ulonwabo kunye nezemidlalo njalo njalo.
Ngaba uyazi ukuba ungazifaka njani ngokufanelekileyo iingcango zeglasi
Ngobuchule obutsha kunye nophuhliso lweshishini leglasi, iimveliso zeglasi zidityaniswe ngokupheleleyo kubomi bethu, zihombise ekhayeni kwimvamisa yokusebenzisa iglasi ngakumbi nangakumbi, kwaye ucango lweglasi alukho kuphela kwishishini lokwakha elaziwa njenge lisetyenziswa rhoqo ngo-deco ...
Hot Ukugoba Glass
Iglasi eshushu yokugoba NGU-ADMIN NOV. 24, 2020 Iglasi yokuhombisa yimveliso yeglasi ngokukodwa esetyenziselwa umhombiso, uninzi lwazo lwenziwe lwenziwa nzulu, kubandakanya ukuhombisa, iqabaka, ukupeyinta, njl.
Iglasi yokujonga ngaphezulu
Ngu Yantai Joyshing Glass Co., Ltd emva kokwakhiwa yantai HouSha Square iglasi isanti cantilever ibhulorho projekthi, iye yagqitywa ngempumelelo, igilasi guardrail umjikelezo weemitha ezili-136, yonke ibhulorho igrafu wasebenzisa 15 + 15 iglasi ngumgangatho elaminethiweyo wobulali, iqhekeza elinye iglasi ubude be ...
Kuthetha ukuthobela imigangatho yesizwe yeglasi elaminethiweyo, iglasi enomsindo, kunye neglasi engenanto eyenziwe ngabo. Phakathi kwezi zinto, ukusebenza ngokubanzi kweglasi elaminethiweyo kunye neglasi engenanto eyenziwe ngeglasi elaminethiweyo yeyona nto ibalaseleyo. Kwizindlu zanamhlanje, isiphumo sokugquma kwesandi silungile, kwaye siye saba ...
Iglasi enomsindo, Izibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, Niyazi nonke?
Iglasi enomsindo luhlobo lweglasi yokhuseleko. Ngapha koko, ikwaluhlobo lweglasi exinyiweyo. Ukonyusa ukomelela kweglasi, iindlela zekhemikhali okanye zomzimba zihlala zisetyenziselwa ukwenza uxinzelelo kuxinzelelo kwiglasi. Xa iglasi iphantsi kwamandla angaphandle, i-surfa ...